Barmuudo.com Sir Madaxweynaha Burundi oo shaaciyey inuu ciidamadiisa kala baxayo dalka Soomaaliya… sababtu maxay tahay?
Dowladda Burundi ayaa ku hanjabtay in ciidamo ka tirsan kuwa ka jooga Soomaaliya ay kala baxeyso howlgalka Midowga Africa AMISOM ee ka socdo dalka Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa sheegay in 5,500 oo ka mid ah askarta AMISOM ee ka socoto dalkiisa inuu kala baxayo dalka Soomaaliya. Madaxweynaha wuxuu cadeeyay in sababta ciidamooda […]
Barmuudo.com Xog Muhiim ah Baarlamaanka Soomaaliya oo ka shiraya magacaabida gudiga doorashada………….
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa maanta kulan ku yeelanaya xarunta golaha shacabka, waxayna noqonayaan baarlamaankii 10-aad oo shir ku yeesha xarunta golaha shacabka. Sida uu sheegay guddoomiyaha KMG ee xildhibaanada golaha shacabka Cismaan Cilmi Boqore, waxaa kulanka maanta diirada lagu saari doonaa dhismaha gudiga doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa. Cismaan Cilmi, wuxuu sheegay in kulanka maanta […]
Barmuudo.com Dagaalkii ciidamada Puntland iyo Liyuu boolis ku dhex maray gobolka Mudug oo laga heshiiyay
Maamulka Puntland ayaa sheegay in xal laga gaaray dagaal maalmo ka hor deegaanada gobolka Mudug ku dhexmaray ciidamada Puntland iyo ciidamada Liyuu boolis. Xasan Maxamed Khaliif, gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland, ayaa sheegay in ciidamada Liyuu boolis weerar ay ku soo qaadeen deegaan ka tirsan dhulka Soomaalida oo Ethiopia aan ka mid aheyn. Gudoomiyaha wuxuu […]
Barmuudo.com Xoolaha Soomaaliya oo suuq cusub ka helay dalalka Yemen iyo Cumaan,,,,,,,,
Ganacsatada Soomaaliyeed ee xoolaha ayaa bilaabay inay suuq cusub u raadiyaan xoolahooda kadib markii ay xirmeen suuqyada xoolaha ee boqortooyada Sacudi Carabiya. Dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dhoofiyay xoolo gaaraya 2,400 oo neef oo lo’ ah kuwaasoo loo qaaday dalalka Yemen iyo Cumaan iyadoo dalalkaasna ay yihiin wadamo suuq u ah xoolaha […]
Barmuudo.com Madaxweyne Xasan Sheekh oo xariga ka jaray Isbitaalka Martini
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xariga ka jaray isbitaalka Martini ee ciidammada Naafada ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. Wasiirka Gaashaandiga, wasiir ku xigeennada Caafimaadka iyo Gaashaandhiga, Taliyaha Ciidanka XDS iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa ka mid ahaa mas’uuliyiintii ka qeybgashay munaasabada xarig jarista ee maanta. Sidoo kale Madaxweynaha […]
Barmuudo.com Madaxweynaha Filibiin oo ku hanjabay in uu diyaarad ka soo ridayo qofkii xatooyo ku kaca…..?
Madaxweynaha dalka Filibiin Rodrigo Duterte ayaa sheegay in uu diyaarad nooca helikabtarka loo yaqaan uu ka soo tuuray qof, waxana uu ku hanjabay inuu sidaa oo kale yeeli doono qofkii isku dayda inuu xado gargaarka la geynayo gobolada ay duufaan ku dhufatay dalka Filibiin, Warkan ayuu Madaxweyne Duterte oo 71 jir ah ka sheegay mid […]
Barmuudo.com Xog muhiim ah : Madaxweyne Shariif Xasan oo markale dib ugu laabtay Addis Ababa….. Sabab tu Maxay tahay?
Madaxweynaha Maamul goboleedka Koofurgalbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa markale dib ugu laabtay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya isagoo ka soo laabtay safar uu ku tegey dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya. Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa toddobaadkii hore ugaga qeybgalay Addis Ababa shir ay ka qeybgaleen Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo wakiilo […]
Barmuudo.com Sir: Maxaa ka cusub Degmada Afgooye……..?
War Deg-deg ah; Dagaal xoog leh ayaa ka bilowday degmada Afgooye oo ka tirsan gobolka Sh/hoose, dagaalkan ayaa waxa uu u dhexeeyaa ciidamada dowlada iyo dagaalyahano ka tirsan Alshabaab oo weerar ku soo qaaday fariisimo ay ku lahaayeen ciidamada dowlada degmada Afgooye. Dagaalkan oo hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsanayo ayaan la ogeyn qasaaraha […]
Barmuudo.com XOG MUHIIM AH : Dowladda Soomaaliya iyo Dowladda Kenya oo Khilaafaad Xogan soo wajahay………. ?
Dowladda Soomaaliya ayaa qorsheyneysa in todobaadyada soo socda ay mar kale joojiso Qaadka laga keeno dalka Kenya, kaddib markii dowladda Kenya ay dhaqan gelin weysay heshiiskii 13-kii bishii September ee sanadkan. Diblomaasi sare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa u xaqiijiyay Jowhar.com in dowladda ay ka fikireyso go’aan ay ka qaadato Qaadka laga keeno […]